About Us - Shandong okusha Ankai-Kitco Co., Ltd
Shandong okusha Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Ithuluzi Co., Ltd. kuyinto kazwelonke zobuchwepheshe ibhizinisi onguchwepheshe ukukhiqizwa CNC umshini amathuluzi. Ngo ifilosofi "Abantu ngamakhasimende, Technical Ukuqamba", inkampani Akekho osindayo imizamo ukudala "ngesivinini esikhulu, ephezulu ukucacisa, ephezulu ukuthembeka" CNC imishini nge nokuphathelene empahla amalungelo esenziwa luningi amandla kwezomnotho, ithalente namandla lobuchwepheshe amandla sezihambile ibhizinisi ifilosofi.
Ngenxa yeminyaka eminingi yokwenza imizamo, inkampani uye wazakhela ngempumelelo ezincane CNC ukucacisa ibha othomathikhi lathe (eyaziwa ngokunemba lathe okuzenzakalelayo) okuyinto ihlukaniswe AK chungechunge, SM chungechunge, SX uchungechunge futhi SC chungechunge, has a umsebenzi ithuba-isigayo inhlanganisela futhi ikakhulukazi ezisebenzayo ezinkulu-batch multi-ezihlukahlukene ephezulu ukucacisa machining imisebenzi ka mncane-shaft nezincane izingxenye eziyinkimbinkimbi ligijima. Imikhiqizo yethu ube ngokunemba high emvula ikhono, nge izingxenye eziyinhloko ifaniswe ukwamukela brand omhlaba odumile, kanye izinqubo zokukhiqiza kanye nobuchwepheshe abaholayo China. Imikhiqizo ngomshini kabanzi isetshenziswa zokuxhumana, imishini kwezokwelapha, ifriji, amathuluzi okubona, ekhaya Imishini, Aerospace, izimoto, izithuthuthu, electronics, izinjini, iwashi umkhakha kanye nezinye izimboni.
Kusukela yaqala ukuba khona, Shandong okusha Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Ithuluzi Co., Ltd. iye ngako okusekelwe ocwaningweni, ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa ephezulu CNC lathes. Esikhathini nefilosofi zebhizinisi "Ngcono njalo, kwamakhasimende Ephakeme", inkampani Sizokwenza abe imishini umkhiqizi wensizakalo izwe phambili.